देउवा सरकारमा उद्योगमन्त्री बन्ने नेताको नाम नै भयो सार्वजनिक, कहिले हुदैंछ सपथ ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
देउवा सरकारमा उद्योगमन्त्री बन्ने नेताको नाम नै भयो सार्वजनिक, कहिले हुदैंछ सपथ ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनाउने नयाँ मन्त्रीको नाम सार्वजनिक भएको छ । प्रम देउवाले सुनिलबहादुर थापालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउने तयारी गरेका हुन् ।
अहिले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि स्वयम प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् । असोज २२ गते गैरसांसदको रुपमा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाईएको थियो । तर, उनले दुई दिन बित्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
थापा सांसद भने छैनन् । सांसद नभएपनि संविधानतः ६ महिनाको लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । थापा यसअघि पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भैसकेका छन् ।
उनको भारतसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध छ । उता, प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रकै केही नेताले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै लविङ गरिरहेका छन् ।